Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04 Trusty Tahr | Avy amin'ny Linux
Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04 Trusty Tahr
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Tutorials / Manuals / Tips
Ubuntu 14.04 Trusty Tahr nahita ny hazavana andro vitsivitsy lasa izay. Tahaka ny ataontsika isaky ny mamoaka an'ity distro malaza ity dia misy ireto zavatra tokony hataonao aorian'ny fanaovana a fametrahana hatrany am-piandohana.
1 1. Alefaso ny Manager Manager
2 2. Mametraka ny fiteny Espaniôla
3 3. Mametraka codecs, Flash, endritsoratra fanampiny, mpamily sns.
4 4. Mametraha toerana fitahirizana fanampiny
5 5. Mametraka fitaovana fanampiana hanamboarana Ubuntu
6 6. Mametraha rindranasa famatrarana
7 7. Mametraha mpitantana fonosana sy fikirakirana hafa
8 8. Mitadiava rindranasa bebe kokoa ao amin'ny Ivon-toeran'ny Software Ubuntu
9 9. Manova interface
10 10. Mametraha tondro sy lisitra haingam-pandeha
11 11. Mametraka ny Compiz & plugins Configuration Manager
12 12. Esory ny menio manerantany
13 13. Esory ao amin'i Dash ny fikarohana "ara-barotra"
14 14. Ampifandraiso amin'ny birao misy anao ny tranonkala
15 15. Ubuntu Desktop Guide
1. Alefaso ny Manager Manager
Azo inoana fa taorian'ny namoahana ny Ubuntu 14.04 dia niseho ireo fanavaozana vaovao ho an'ireo fonosana samihafa izay miaraka amin'ny sary ISO nozarain'i Canonical.
Noho io antony io, rehefa vita ny fametrahana dia ampirisihina hatrany hitantana ny Vaovao farany Manager. Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fikarohana azy amin'ny Dash na amin'ny fanatanterahana ity manaraka ity avy amin'ny terminal:
sudo apt update sudo apt upgrade
2. Mametraka ny fiteny Espaniôla
Tao amin'ny Dash no nanoratako Fanohanana ny fiteny ary avy eo ianao dia ho afaka manampy ny fiteny tianao.
Rakibolana amin'ny teny Espaniola ho an'ny LibreOffice / OpenOffice
Raha tsy manana ny mpanamarina ny tsipelina amin'ny fiteny espaniola ianao dia azo atao tsara ny manampy azy toy izao:
1. Mandehana any Ivon-toerana fanitarana LibreOffice
2. Tadiavo ny Rakibolana espaniola
3. Ampidino ny rakibolana tianao indrindra (ankapobeny na manokana amin'ny firenenao)
Amin'ity dia hanana rakitra OXT izahay. Raha tsy izany dia mila manova ny fanitarana ilay rakitra alaina ianao.
4. Sokafy LibreOffice / OpenOffice, safidio Fitaovana> Fanitarana ary tsindrio hametraka, mankany amin'ny lahatahiry misy ny fisie fisintomana izahay ary mametraka azy.
Raha te hahita mpitari-dalana feno manazava ny fomba fametrahana ny tsipelina espaniola sy fitsipi-pitenenana Espaniola ao amin'ny LibreOffice / OpenOffice, dia manome hevitra aho ny hamaky ity taloha ity lahatsoratra. Nanomana ihany koa izahay a hitari-dalana hametraka ny mpanamarin-tsipelina espaniola ao amin'ny Firefox / Chromium.
3. Mametraka codecs, Flash, endritsoratra fanampiny, mpamily sns.
Noho ny olana ara-dalàna, ny Ubuntu dia tsy afaka mampiditra andian-fonosana mavesatra izay, etsy ankilany, dia tena ilaina ho an'ny mpampiasa: codecs hilalao MP3, WMV na DVD misy encrypt, loharano fanampiny (be mpampiasa amin'ny Windows), Flash, mpamily. tompony (hampiasa tsara kokoa ny asan'ny 3D na Wi-Fi), sns.
Soa ihany fa mamela anao hametraka an'izany rehetra izany ny Ubuntu. Mila mamela izany safidy izany ianao amin'ny iray amin'ireo efijery installer.
Raha mbola tsy nanao an'izany ianao dia azonao apetraka toy izao:
Mpamily karatra horonan-tsary
Ny Ubuntu dia tokony mamantatra anao ary manaitra anao amin'ny fisian'ny mpamily 3D. Amin'izay dia ho hitanao ny kisary iray ho an'ny karatra horonantsary eo amin'ny tontonana ambony. Tsindrio ilay kisary ary araho ny torolalana. Azo atao ihany koa ny mametraka ireo mpamily fananana ao amin'ny Dash> mpamily fanampiny.
Codec sy endrika endriny
Raha iray amin'ireo tsy afaka miaina tsy mihaino MP3, M4A ary endrika fananana hafa ianao, ary koa tsy ho tafavoaka velona amin'ity tontolo feno habibiana ity raha tsy afaka milalao ny horonan-tsarinao amin'ny MP4, WMV ary endrika fananana hafa, misy vahaolana tena tsotra. Mila tsindrio fotsiny ny bokotra etsy ambany:
Mametraha toerana famerana voafetra
na manorata amin'ny terminal:
Mba hanampiana fanohanana ireo DVD voahidy ("original rehetra") dia nanokatra terminal aho ary nitendry ireto manaraka ireto:
sudo apt apetraka libdvdread4 sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
4. Mametraha toerana fitahirizana fanampiny
GetDeb & Playdeb
GetDeb (Ubuntu Click And Run taloha) dia tranokala iray anaovan'ny fonosana Deb sy ny kinona fonosana ankehitriny izay tsy tonga ao amin'ny tahirin'ny Ubuntu ary ampiasain'ny mpampiasa farany.
Playdeb, ilay toerana fametrahana ny lalao ho an'ny Ubuntu, dia noforonin'ireo olona nanome antsika getdeb.net ihany, ny tanjon'ity tetikasa ity dia ny hanome ny mpiserasera Ubuntu trano fitehirizana tsy ofisialy miaraka amin'ireo kinova farany amin'ny lalao.
5. Mametraka fitaovana fanampiana hanamboarana Ubuntu
Ny fitaovana malaza indrindra hanamboarana ny Ubuntu dia ny Ubuntu Tweak (na dia ilaina aza ny manazava fa tato ho ato dia toa hifarana ny fivoarany, farafaharatsiny amin'ny ampahany amin'ilay namorona azy). Ity fahagagana ity dia ahafahanao "mirindra" ny Ubuntu ary mamela azy araka ny itiavanao azy.
Mba hametrahana Ubuntu Tweak dia nanokatra terminal aho ary nitendry:
sudo add-apt-repository ppa: tualatrix / ppa sudo apt update sudo apt apetraka ubuntu-tweak
UnSettings dia fitaovana vaovao amin'ny fanaingoana an'i Ubuntu. Misy programa hafa toa ny MyUnity, Gnome Tweak Tool, ary Ubuntu-Tweak izay manao asa mitovy amin'izany, saingy ity dia misy fiasa miavaka.
sudo add-apt-repository ppa: diesch / test sudo apt fanavaozana sudo apt hametraka unsettings
6. Mametraha rindranasa famatrarana
Mba hamerenana sy hamehezana ireo endrika malaza maimaim-poana sy manan-katao dia mila apetrakao ireto fonosana manaraka ireto:
sudo apt apetraka rar unace p7zip-feno p7zip-rar sharutils mpack lha arj
7. Mametraha mpitantana fonosana sy fikirakirana hafa
Synaptic - dia fitaovana sary ho an'ny fitantanana fonosana miorina amin'ny GTK + sy APT. Synaptic dia mamela anao hametraka, hanavao na hanaisotra fonosana programa amin'ny fomba marobe.
Tsy mbola apetraka amin'ny alàlan'ny default (araka ny lazain'izy ireo amin'ny habaka amin'ny CD)
Fametrahana: Search Software Center: synaptic. Raha tsy izany dia azonao atao ny mampiditra an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal ...
fahaizana - Mandidy hametraka rindranasa avy ao amin'ny terminal
Tsy ilaina izany satria afaka mampiasa ny baiko "apt" foana isika, fa eto kosa avelako ho an'ireo izay maniry izany:
Fametrahana: Search Software Center: aptitude. Raha tsy izany dia azonao atao ny mampiditra an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal ...
sudo apt apetraka aptitude
gdebi - Fametrahana fonosana .deb
Tsy ilaina izany, satria rehefa mametraka ny .deb amin'ny tsindry roa sosona dia misokatra ny Software Center. Ho an'ny nostalgic:
Fametrahana: mikaroha ao amin'ny Center Software: gdebi. Raha tsy izany dia azonao atao ny mampiditra an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal ...
Tonian-doka - Mety mahasoa izy io rehefa manamboatra Gnome.
Fametrahana: Search Software Center: dconf editor. Raha tsy izany dia azonao atao ny mampiditra an'ity baiko manaraka ity amin'ny terminal ...
sudo apt apetraho fitaovana dconf
Mba hampandehanana azy dia nanokatra an'i Dash aho ary nanoratra "dconf editor".
8. Mitadiava rindranasa bebe kokoa ao amin'ny Ivon-toeran'ny Software Ubuntu
Raha tsy mahita rindranasa hanao izay tianao ianao na tsy tianao ireo rindranasa tonga tampoka ao amin'ny Ubuntu dia afaka mankany amin'ny Ubuntu Software Center ianao.
Avy eo ianao dia afaka mametraka rindranasa tena tsara amin'ny tsindry vitsivitsy monja. Ny pika malaza sasany dia:
OpenShot, mpamoaka horonantsary
AbiWordMpanonta lahatsoratra tsotra sy maivana
chrome, mpizaha tranonkala (kinova maimaim-poana amin'ny Google Chrome)
XBMC, ivon'ny haino aman-jery
GIMP, mpamoaka sary (karazana Photoshop)
9. Manova interface
Ho an'ny interface GNOME nentim-paharazana
Raha tsy mpankafy Unity ianao ary te hampiasa ilay interface GNOME nentim-paharazana, azafady mba ataovy izao manaraka izao:
Tsindrio ny anaranao
Tadiavo ny menio fivoriana etsy ambanin'ny efijery
Ovay avy amin'ny Ubuntu ho lasa Flashback GNOME
Raha sanatria tsy misy io safidy io dia andramo alefa aloha ity baiko manaraka ity:
sudo apt apetraho ny gnome-session-flashback
Vorona GNOME 3 / GNOME
Raha te hanandrana ny GNOME Shell ianao fa tsy ny firaisana.
Fametrahana: ampidiro ao amin'ny terminal ity baiko manaraka ity:
sudo apt apetraho gnome-shell
Azonao atao koa ny mametraka azy avy ao amin'ny GNOME Shell PPA, izay azo antoka fa hampiditra kinova nohavaozina kokoa:
sudo add-apt-repository ppa: ricotz / andrana fitaovana fanitsiana gnome-shell-extensions
Mitandrema: ny fametrahana GNOME Shell amin'ity fomba ity dia mety hametraka fonosana GNOME hafa navelan'ny bandy Ubuntu. Ohatra, Nautilus. Azo antoka fa mety izany no tadiavinao, ka raha izany dia tsy hisy ny olana fa tokony ho fantatrao izay hitranga.
Cinammon dia fork an'ny Gnome 3 ampiasaina ary novolavolain'ny mpamorona ny Linux Mint izay ahafahanao manana bara fisoritana asa ambany kokoa miaraka amin'ny Start Menu mahazatra.
sudo add-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / cinnamon-stable sudo apt fanavaozana sudo apt apetraka kanelina
MATE dia fork an'ny Gnome 2 nipoitra ho mpisolo toerana ho an'ireo mpampiasa GNOME taorian'ny fiovana mahery vaika nanjo an'ity tontolon'ny birao ity rehefa nampiasa ny Shell nampiady hevitra azy. Amin'ny ankapobeny, ny MATE dia GNOME 2, saingy novain'izy ireo ny anaran'ny fonosana sasany.
sudo add-apt-repository "deb http://packages.mate-desktop.org/repo/ubuntu $ (lsb_release -sc) main" sudo add-apt-repository "deb http://repo.mate-desktop.org / ubuntu $ (lsb_release -sc) main "sudo apt fanavaozana sudo apt apetraka mate-archive-keyring sudo apt apetraka ny mate-core mate-desktop-environment
10. Mametraha tondro sy lisitra haingam-pandeha
tondro - Azonao atao ny mametraka mari-pamantarana marobe, izay hiseho eo amin'ny tontonana ambony amin'ny biraonao. Ireo tondro ireo dia afaka mampiseho fampahalalana momba ny zavatra maro (toetr'andro, sensor fitaovana, ssh, monitor system, dropbox, virtualbox, sns.).
Misy lisitr'ireo tondro feno, miaraka amina famaritana fohy momba ny fametrahana azy ireo, ao amin'ny Anontanio an'i Ubuntu.
Lisitra haingana - Ny Quicklists dia mamela anao hiditra amin'ny fampiasa mahazatra an'ny rindranasa. Mihazakazaka mamaky ilay bar izay miseho eo ankavia eo amin'ny biraonao izy ireo.
Ubuntu dia efa tonga miaraka amina banga maromaro. Na izany aza, azo atao ny mampiasa lisitra haingam-pandeha sasany. Misy lisitra feno, miaraka amin'ny famaritana fohy momba ny fametrahana azy, ao amin'ny Anontanio an'i Ubuntu.
11. Mametraka ny Compiz & plugins Configuration Manager
Compiz no iray mahatonga ireo fitaovam-pitehirizana mahatalanjona mamela antsika tsy hiteny intsony. Mampalahelo fa tsy tonga miaraka amina sehatra interface i Ubuntu mba hanamboarana Compiz. Ary koa, tsy miaraka amin'ireo plugins napetraka rehetra akory io.
Mba hametrahana azy ireo dia nanokatra terminal aho ary nitendry:
sudo apt apetraka compizconfig-setting-manager compiz-plugins-extra
12. Esory ny menio manerantany
Mba hanesorana ilay antsoina hoe "menio manerantany", izay mahatonga ny fisehon'ny lozisialy miseho eo amin'ny tontonana ambony amin'ny biraonao, dia nanokatra terminal fotsiny aho ary nitendry ireto manaraka ireto:
sudo apt esory ny appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
Miala ary miditra indray.
Mba hamerenana ireo fanovana dia sokafy terminal ary ampidiro:
sudo apt apetraka amin'ny appmenu-gtk3 appmenu-gtk appmenu-qt
Menus fikandrana ao amin'ny bara lohateny
Talohan'izay, ny menus an'ny rindranasa izay tsy nasiana maxima dia niseho koa tamin'ny menio manerantany. Na izany aza, azo atao izao ny misimisy amin'ireo menus ao amin'ireto varavarankely ireto hiseho eo amin'ny tsanganana lohatenin'izy ireo. Mba hanaovana izany dia mila manokatra ny Dash fotsiny ianao, manoratra "Appearance", mankanesa any amin'ny tabilao "Behaviour" ary safidio ny safidy "Asehoy ireo menio am-baravarankely eo amin'ny tsanganana lohateny."
13. Esory ao amin'i Dash ny fikarohana "ara-barotra"
Mba hanakanana ny fikarohana an-tserasera dia nanokatra ny dashboard aho Fikirana rafitra> Tsiambaratelo sy filaminana> Fikarohana. Rehefa tonga any, esory ny safidy "Ampidiro ny valin'ny Internet."
Raha tsy mikasa afa-tsy ny fikarohana "varotra" miseho ao amin'ny Dash, dia afaka mankany ianao Fampiharana> Valin'ny sivana> Karazana> Fanitarana. Tsindrio ny plugin ary safidio deactivate.
Raha te-hiala ny fikarohana "ara-barotra" rehetra (Amazon, Ebay, Music Store, Popular Tracks Online, Skimlinks, Ubuntu One Music Search & Ubuntu Shop) dia afaka manokatra terminal ianao ary manao izao baiko manaraka izao:
gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disable scope "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay .scope ',' more_suggestions-ubuntushop.scope ',' more_suggestions-skimlinks.scope '] "
14. Ampifandraiso amin'ny birao misy anao ny tranonkala
Ampio ny kaonty media sosialinao
Mba hanombohana dia niditra tamin'ny solaitrabe aho Fikirana rafitra> Kaonty amin'ny Internet. Rehefa tonga eo dia tsindrio ny bokotra "Add Account".
Ny serivisy tohanan'ny dia misy ny Aol, Windows Live, Twitter, Google, Yahoo!, Facebook (ary Facebook Chat), Flickr, ary maro hafa.
Ny rindranasa izay mampiasa an'ity angona ity dia Empathy, Gwibber, ary Shotwell.
Ubuntu WebApps dia mamela tranokala toy ny Gmail, Groovehark, Last.fm, Facebook, Google Docs ary maro hafa, hiaraka tsy tapaka amin'ny birao Unity: afaka hikaroka ny tranokala amin'ny HUD ianao, hahazo fampandrenesana amin'ny birao, hanampy ny lisitra haingana ary hampidirina ao anaty menio hafatra sy fampandrenesana mihitsy aza.
Hanombohana, mitsidika fotsiny ny iray amin'ireo tranonkala tohanan'ny (misy lisitra feno Eto) ary kitiho ny pop-up "install", izay hiseho toa ny aseho amin'ny sary etsy ambony.
15. Ubuntu Desktop Guide
Tsy misy tsara noho ny mijery ny antontan-taratasy ofisialy (amin'ny Espaniôla) ho an'ny Ubuntu. Izy io dia fanampiana tena tsara ho an'ireo vao tonga ary, ankoatry ny maha feno azy dia nosoratana niaraka tamin'ny mpampiasa vaovao kokoa izy io, ka tena ilaina sy mora vakiana.
Ho hitanao ny vaovao momba ny zava-baovao ao amin'ny Ubuntu sy ny fampahalalana momba ny fampiasana ilay mpandefa launcher hanombohana fampiharana (izay mety hampisavoritaka ho an'ireo izay mbola tsy nampiasa Unity mihitsy), ny fomba fitadiavana rindranasa, rakitra, mozika ary maro hafa amin'ny Dash, ny fomba fitantanana ny rindranasa sy ny fikirakirana miaraka amin'ny tsipika menio, ny fomba fanidiana ny session, famonoana na fanovana ny mpampiasa ary ny maro hafa sns.
Mandehana any amin'ny làlan'ny birao Ubuntu 14.04
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Inona no hatao aorian'ny fametrahana Ubuntu 14.04 Trusty Tahr
140 hevitra, avelao ny anao
Pepe dia hoy izy:
Salama, manana PC misy Intel Pentium 3.00 Ghz sy 2Gb Ram aho. Hilamina tsara ve ny Ubuntu 14.04 LTS? Ary Kubuntu sa Xubuntu?
Valiny tamin'i Pepe
Omar dia hoy izy:
Tsara. Raha io Pentium ampiasainao io dia misy fotony roa, dia tsy manana olana ianao amin'ny fitantanana ny Ubuntu sy Kubuntu; raha tokana-fototr'izany; Manoro hevitra ny Xubuntu ho tsara kokoa aho. Mihobia!
Valiny tamin'i Omar
Izay raha ny hevitro. Toy izany koa, azonao atao ny mizaha toetra azy avy amin'ny pendrive mba hahitanao ny fomba fiasan'izy io ary raha hitany tsara ny fitaovanao rehetra.
Manoro hevitra anao aho hamaky: https://blog.desdelinux.net/como-instalar-linux-desde-un-pendrive-usb/
Javier dia hoy izy:
Mihetsika kely angamba bro
Valiny tamin'i Javier
Carlos Sierra dia hoy izy:
Ny marina dia raha mandeha izy nefa miadana be, mamporisika anao aho raha mila Ubuntu mandeha tsara ianao dia tsara kokoa ny LUBUNTU haingana kokoa amin'ny milina taloha noho ny XUBUNTU.
Valiny tamin'i Carlos Sierra
Carlos M dia hoy izy:
hace 6 taona
Nifindra monina avy tao amin'ny Ubuntu 14.04 mankany Lubuntu 14.04 aho ary tena tsara kokoa ny fampisehoana, ireo 2gbs roa ireo dia toa 4.
Valiny tamin'i Carlos M
Sebastian dia hoy izy:
eny ny zandry kely mihazakazaka mahay
Mamaly an'i sebastian
Arthur dia hoy izy:
Manondro ny Ubuntu 14.04 Saucy Salamander ianao ao amin'ny andalana voalohany. Misaotra tamin'ny fampahalalana
Valiny tamin'i Arturo
MMM dia hoy izy:
Mitranga izany amin'ny alàlan'ny fandikana sy apetaka ……… ankasitrahana ny lahatsoratra saingy kopian'ny hafa… miarahaba anao
Mamaly an'i mmm
Salama! Misaotra amin'ny vaovao. Malahelo ny fehintsoratra voalohany aho, efa nanitsy azy aho. 🙂
Ary eny, mitovy be amin'ilay torolàlana teo aloha (na dia misy fiovana aza) satria mbola mitovy ihany ny Ubuntu, sa tsia? Samy hafa be ve ny fanovana ny fiteny amin'ny kinova iray amin'ny iray hafa?
Tsy dia be loatra, fa raha ilaina ny mametraka zavatra manokana kokoa momba izay resahina, toy ny lohahevitry ny menio manerantany izay amin'izao fotoana izao, ao amin'ity kinova ity dia toa manova azy ny safidy sary. Toy izany koa no ankasitrahana che!
py_crash dia hoy izy:
Ny ppa ppa: makson96 / fglrx dia tsy manohana an'i Ubuntu 14.04
Mamaly amin'ny py_crash
Irvandoval dia hoy izy:
Raha ny marina dia manana olana aho ary manana PC misy HD3000 ati manana 13.04 ary tsy manavao ny 13.10 noho ny fanohanan'io ppa io: / ary tsy hitako izay hatao, angamba ny tsara indrindra dia ny miverina amin'ny 12.04, sa tsy izany?
Valiny tamin'i Irvandoval
Juan Carlos Senar dia hoy izy:
Ny Ati hd3450 -ko dia miasa tsara miaraka amin'ireo mpamily flgrx natolotra ahy avy Mpamily fanampiny ao amin'ny Mint 13 (Ubuntu 12.04). Hiverina aho ...
Valiny tamin'i Juan Carlos Senar
: O misaotra amin'ny tendrony 🙂
Marina izany. Rehefa niresaka tetsy ambany aho dia nanavao ilay ampahany amin'ilay torolalana.
Misaotra tamin'ny data!
Alvaro dia hoy izy:
Salama maraina amin'izao fotoana izao ny ubuntu tweak ppa dia tsy manohana fahatokisana, ary ny fanesorana ny menio manerantany avy amin'ny terminal dia tsy hevitra tsara satria amin'izao fotoana izao dia azo kilemaina amin'ny fikirakirana - fisehoana - fitondran-tena. mahafaly
Valio i Alvaro
Azo alaina ao amin'ny http://www.ubuntu-tweak.com ny kinova 0.8.7 mifanaraka amin'ny teôria amin'ny Ubuntu 14.04.
Na izany aza, ny fametrahana ny fonosana .deb dia manome olana fiankinan-doha izay voahitsy amin'ny alàlan'ny mihazakazaka ao amin'ny terminal $ sudo apt-get install -f –fix-tsy hita.
Rehefa vita izany dia mandeha tsara ilay programa.
Marina izany! Misaotra tamin'ny fandraisana anjara. Efa nahitsiko io ampahan'ny torolàlana io. Amin'izao fotoana izao, ny fomba fanolorana azy dia ny fampiasana ny fampiharana Drivers Tambahan, izay azo idirana amin'ny Dash.
Salama Alvaro! Tsy marina izany. Ny menio manerantany dia tsy azo foanana avy eo. Azo ovaina amin'ny varavarankely tsy misy fetra ihany izy io, araka ny nohazavaina tamin'ny lahatsoratra.
Fahasamihafana kely izy io, fa fahasamihafana amin'ny farany.
Salama, nandinika ny Xubuntu 14.04 nandritra ny andro maromaro aho, ary gaga fa mbola tsy nahazo fanavaozana izany. Manaova amin'ny terminal sudo apt-get fanavaozana && sudo apt-get fanavaozana tsy manipy zava-baovao. Vita sy vanim-potoana io, tsy aseho fa misy fonosana azo alaina; tsy manome lesoka. Toa tsy mahazatra ahy izany.
Etsy ankilany, ny mpanonta ahy dia tsy manamboatra ny azy ho azy intsony rehefa mampifandray azy aho. Tsy maintsy ataoko amin'ny tanana izany ary, na dia mametraka tsara toy izao aza izy, dia toa dingana iray miala amin'ny Xubuntu 12.04.
Misy olon-kafa mitranga?
Mario dia hoy izy:
fotoana vitsy lasa izay dia vitako ny nametaka azy ary raha fanavaozana (vitsy) no nivoaka, saingy nivoaka izy ireo niaraka tamin'ny baiko apt-get dist-upgrade. Izaho koa dia hametraka aptitude, manampy ho antony ahafahany mitady fonosana amin'ny fikarohana aptitude ary manaisotra ireo vondrona iray manontolo nefa tsy mamela fonosana malalaka, toy ny ao amin'ny motherboard Debian.
Mamaly an'i Mario
Ana dia hoy izy:
Salama Juan Carlos, Ahoana no hametrahanao ny mpanonta? Mametraka ny mpamily aho ary rehefa te-hanao pirinty aho dia mahazo hafatra milaza fa mila manamboatra ny mpanonta aho. Tamin'ny kinova taloha dia nandeha tsy nisy olana. Tsy mahita valiny amin'ny forum aho.
Fiarahabana sy fisaorana
Valiny tamin'i Ana
Salama Ana: mpanonta inona no anananao?
Araka ny nolazaiko, ao amin'ny Xubuntu 12.04 ny mpanontafiko Epson sx125 dia namboarina ho azy rehefa mifandray ary ny scanner (multifunction io) dia tsy maintsy manamboatra azy aorian'ny fisintomana fonosana 2 .deb avy amin'ny tranokala Epson.
Ao amin'ny Xubuntu 14.04 dia tsy hikirakira ny mpanonta rehefa tafiditra ao (antenaina fa hamboarina amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy io) ary nahita fomba roa hanaovana an'io aho:
1.- Mandehana mankany Menu> Fikirana rehetra> Hardware> Fanontana. Tsy misy miseho ary tsindrio aho Manampy Printer. Avy eto dia efa hita izany ary mila manao toy ny mahazatra fotsiny ianao Manaraka, Tohizo, sns. hatramin'ny farany.
2.- Ampiasao kaopy avy amin'ny navigateur miditra ny adiresy http://localhost:631/ ary araho ny torolalana araka ny voalaza eto:
Raha HP ny mpanontao anao dia azo atao (indraindray mitranga izany) fa, araky ny voalazanao dia toa voalamina tsara izy io ary tsy mandeha. Ny vahaolana dia ny fametrahana ny fonosana hplip-gui ($ sudo apt-mahazo mametraka hplip-gui) ary avy eo mihazakazaka $ sudo hp-fananganana ary araho ny torolalana. Ny ankamaroan'ny fotoana dia mandeha.
Saeron dia hoy izy:
Fantatro fa Arzantina ianao, saingy mila manavaka ny fomba fiteninao sy ny fomba fanoratanao ianao. Ny zavatra toa sos = ianao ary tadiavina = tadiavina, ary ect lava.
Mamaly an'i Saeron
Ha, nahasarika ny saiko ihany koa ny nanoratany toy izao ... noho ny nolazaiko hoe, hey Argentina ity ... ary Arzantina aho ... tsy azoko hoe maninona izy no tokony hanova ny mombamomba antsika? Mazava ho azy fa misy fahasamihafana eo amin'ny fomba fiteninao sy ny fomba fanoratanao ... fa tsy amin'ny zavatra soratanao, fa amin'ny lafiny «fanoratana» ... lazaiko aminao fa izahay Arzantina koa dia manoratra miaraka amin'ireo «fiteny iditra ireo »(Na inona no iantsoana azy ireo). Fa alaivo an-tsaina hoe na ny Yankees aza dia tokony hanova ny fiteniny ho an'ireo any Great Britain, na ny Peroviana, na ny Meksikana dia hitovy ....
Salama triple m!
Mankasitraka ny hevitrao aho saingy manaitra ahy fa amin'ny maha Arzantina anao dia hitanao fa "hafahafa" ny mahita lahatsoratra nosoratana toa izao. Na any La Nación na any amin'ny gazety any Arzantina aza dia manoratra toa izao.
Etsy ankilany, mahazo aina aho manoratra amin'ny maha-Arzantina ahy, miaraka amin'ireo "localisations" -ko, toy ny bilaogy marobe tazomin'ny bilaogera Espaniôla manaja ny "localisme" azy manokana (mampiasa anao hanoratra, ohatra). Manasa anao hanoratra amin'izy ireo koa aho mba hahafahan'izy ireo manova ny fomba fanoratany ary misafidy Espaniôla "tsy miandany". Ohatra fotsiny dia manome rohy anao aho: http://www.muylinux.com/?s=ois
Che, toa tsy nahalala na inona na inona aho ... Nanaitra ahy ny nahita Arzantina iray hafa, tsy ny hampijanonanao azy intsony satria noheveriko fa avy any Linux dia avy any Cuba izy .... fa mazava ho azy faly aho fa manoratra miaraka amin'ny localism ianao (izay no nolazaiko). Mahatsapa aho fa matoa aho nanao «tsikera» etsy ambony, dia noheverinareo ho ratsy ny hevitro rehetra. Mifanohitra amin'izay ... (mety diso aho) fa raha tsy izany dia tsy azoko hoe ahoana no fomba handisoanao hevitra ny teniko toy izany?
Ary ny nolazaiko tao amin'ny fanehoan-kevitra manaraka hoe aleoko ny Espaniola tsy miandany dia ny mametraka ny tenako eo amin'ny toeran'ilay iray hafa, satria oh. Very ny localisation Mexico ... ary tsara ... fa averiko ihany, nahafinaritra ny nahita ny soratra tamin'ny Arzantina tao amin'ity bilaogy ity izay noheverin'i Kioban.
diazepan dia hoy izy:
Iraisam-pirenena ity bilaogy ity. Manoratra amin'ny tenim-paritra espaniola rehetra izahay.
Mamaly an'i diazepan
Na izany na tsy izany, azafady, miala tsiny aho raha nanelingelina anao ny hevitro, satria tsy ny fikasako no tsy ny fanaovana copie copie teo aloha fa io no noeritreretiko fa mankasitraka ny asa rehetra.
Alberto dia hoy izy:
ianareo tsy localisme fa ny endrika tranainy indrindra.
Mamaly an'i Alberto
«Ianao», «mila» dia eo an-toerana ihany koa, fa ny peninsular, dia hampiasaiko «are», «want / want», an'ny Espaniola tsy miandany
any dia …… localities… sep ny Espaniola tsy miandany dia tony ho an'ny rehetra.
Ary ny fanoratana amin'ny fampiasana ny "ianao" sy "ianao" ary izay rehetra tsy fanatontoloana? Mba miangavy re..
Manasa anao aho hamaky izay lazain'ny Royal Spanish Academy momba ny fomba fanoratako. «Voseo» no iantsoana azy ary ampiasaina any Arzantina sy firenena hafa: http://lema.rae.es/dpd/srv/search?id=iOTUSehtID6mVONyGX
Tsy fomba fanoratana tsy novolena io ary tsy "fomba fitenenana" fa fomba fanehoana ny tena eken'ny RAE.
Araka ny nolazaiko anao teo aloha: Manaiky aho, nefa mangataka aminao aho mba hamerenanao famakiana, mazava tsara hoy ilay namana Mario fa localisme ireo.
Ny zava-mitranga dia misy olona maro mino fa miteny Espaniola / ofisialy "Espaniola / Castilian izy ireo ary, manavakavaka ny ambiny. Ny espaniola tsy miandany dia toy ny unicorn, angano izay tsy tena misy. Manohy manoratra araka izay tratra ianao ary tsy miraharaha ireo "manam-pahaizana" amin'ny fiteny ireo. Ny kinova Espaniôla rehetra dia mitombina tanteraka, tafiditra ao ny Espaniola-Arzantina, ka aza milaza izany aminao. Mandrosoa amin'ny bilaogy. Salama.
Mampalahelo fa diso ianao. Tsy fomba fanoratra "toy ny miteny" io, ary koa fomba fanoratana tsy kolontsaina.
Tomas dia hoy izy:
Ry Saeron malala, (voalohany indrindra dia manazava aminao aho fa avy any Madrid aho manana aretina madio, «saka» tsara).
Ny mpanjakanao dia somary mpanjanatany ihany, miaraka amina karazam-bolo somary maty. Ampidiro ny Diksionera Panispanico misy fisalasalana ary hazavao izy ireo.
Ao amin'ny vondrona miteny Castilian, ny Espaniôla dia subset kely ary tsy manan-jo hametraka na inona na inona izahay, tena be dia be no napetrakay tany Amerika Latina nandritra ny taonjato maro.
PS.: Niaina 28 taona tao Buenos Aires aho ary betsaka ny zavatra mila ianarantsika avy amin'ireo faritra ireo.
Mamaly ny fitifirana
jamin-samuel dia hoy izy:
Ny mpamorona an'i Kanelina dia manome toky fa ny desktop kanelina dia tsy fork fa ny tontolo iainany xD
Mamaly an'i jamin-samuel
Ary satria? Raha fork ... sa tsia?
Miorina amin'ny inona no ilazan'izy ireo izany?
ferchmetal dia hoy izy:
Vao tsy ela aho no nametraka ubuntu 14.04 (faramparany fa tsy beta) ary tsy haiko ny antony fa matoa ny version 10.10 ubuntu dia lasa toy izany, miadana tokoa, satria mampiasa firaisankina aho, mihantona ny varavarankely ary ny zavatra rehetra dia ekeko fa haingana kokoa io kinova 14.04 io , saingy tsy haiko fa manantona ahy tsy toy ny tamin'ny 13.10 sy 13.04, tena. Vao haingana aho no niverina tany amin'ny Fedora ary nijanona tao amin'ny Fedora XFCE 🙂
Valiny amin'ny ferchometal
andro dia hoy izy:
Inona no hatao aorian'ny fametrahana ny ubuntu 14.04 mahatoky tahr?
mamolavola sy mametraka linux arch: p
Mamaly an'i jomada
Jua! Na izany aza, tsy ratsy mihitsy io kinalan'ny Ubuntu io ... somary milamina ihany (raha ampitahaina amin'ireo teo aloha).
Izenzo dia hoy izy:
Na OS fototra, Linux tena mahafinaritra.
Valiny tamin'i Izenzo
Rafael Mardojai dia hoy izy:
Hee hee hee… ._. Raha hametraka Arch aho dia aleoko miverina amin'ny windows ary mijanona mandritra ny fiainana xD
Valiny tamin'i Rafael Mardojai
Julio dia hoy izy:
Salama tsara. Heveriko fa novakianao fa ity kinova Ubuntu vaovao ity dia miaraka amin'ny LibreOffice 4.1. Hatramin'ny andiany 3.6 ary nohatsaraina avy amin'ny kinova 4.x dia napetraka ao anaty programa ireo rakibolana mahazatra ny fiteny sy ny mitovy hevitra aminy.
Mamaly an'i jolay
Tsara! Misaotra tamin'ny fandraisana anjara!
Juan Carlos dia hoy izy:
Raha tsiahivina fotsiny dia tsy ilaina intsony ny "apt-get" fametrahana sy ny paika hafa, izao vao soraty ny baiko "apt"; ohatra, "sudo apt esory Spanish-idiom" (hehe, sangisangy izany, aza tezitra).
Valiny tamin'i Juan Carlos
Ernesto Flores dia hoy izy:
Fanavaozana araka ny voalaza eto, fa ny hany zavatra tsy tiako atomboka dia ny kinova Audacity (2.0.5) ho an'ity distro ity sy ho an'ny hafa, tsy manaiky plugins Linux teratany toa ny LADSPA, LV2, DSSI, sy ny hafa izay nampidirina matetika rehefa nitantana ny plugins avy amin'ny Software Administrators. Farafaharatsiny tsy haiko ny mitantana azy ireo amin'ny fomba hafa. Izay fanehoan-kevitra mety mahasoa antsika amin'ity tranga ity dia ankasitrahana mialoha.
Tamim-pahatsorana: Ernesto Flores
Valiny tamin'i Ernesto Flores
Essaú dia hoy izy:
omeo fotsiny fa havaozina ny APT, tsy sudo apt-get install intsony no apetraka fa sudo apt install.
kinova vaovao APT amin'ny Debian sy Ubuntu: http://rootsudo.wordpress.com/2014/04/20/nueva-version-de-apt-en-debian-y-ubuntu/
Mamaly an'i Essaú
Marina ny anao! Inona no atao hoe fanao.
Efa navaozina izy io. 🙂
Arismendy dia hoy izy:
Salama, misaotra anao noho ity fandraisana anjara ity. Te hahafantatra ny fomba fametrahana lohahevitra aho ary hanova ny fisehoany amin'ny Ubuntu. Vao nametraka 14.4 aho. Noob aho.
Valiny ho an'i Arismendy
Mordraug dia hoy izy:
Torolàlana tena tsara toa an'i Pablo 🙂
Toa ahy fa ity kinova ity dia mpandimby mendrika ny hamaritana mazava ho azy, mazava ho azy ny dikan-xfce ihany, satria ny firaisankina dia tsy nahomby mihoatra ny basy fitifirana XD. Ny lesoka hitako fotsiny dia ny awn tsy ao amin'ny toerana fitahirizana (hatramin'ny beta) na inona na inona izay tsy azonao amboarina amin'ny 10 segondra ao amin'ny terminal = ^. ^ = Saingy avelako eo ilay hevitra ò.ò
Manoro hevitra mafy ny xfce aho tsy ho an'ny hazavany sy ny hamafiny ihany, fa koa noho ny fikirakirana avo. Ny firaisana dia tsy naharesy lahatra ahy / nankafy / niasa mihitsy ka azoko ny = ^. ^ =
P.S. Manantena aho fa azon'izy ireo atao ny manamboatra ny kaontiko satria tsy afaka ny hanao hevitra miaraka aminy aho, afaka miditra aho fa rehefa manandrana mamoaka ny hevitro dia manamarika ahy fa tsy tafiditra ao amin'ny TT aho dia efa herinandro maromaro izao no nalahelo tahaka izao ary mampalahelo Tsapako fa tsy nisy hevitra navoaka momba ahy nanomboka ny TT
Valiny ho an'i Mordraug
Afaka miditra haneho hevitra amin'ny kaontiko aho izao, heveriko fa ny lesoka dia ahy XD ... na ny kaontiko dia manana OO
Tsara! Faly aho fa nahitsy ny olana. 🙂
Mahafinaritra ny mahita anao manodidina eto Saito.
Ari dia hoy izy:
Tsy mandeha ny repository Unsettings, ho an'ny kinova 13.10 ... tsy mandeha koa izany.
Ary toy izany koa no mitranga amin'ny Kanelina ... tsy mandeha ny trano fitehirizana, aza asiana.
Raha misy manana ny marina, azafady… ampitao ny angona. Misaotra anao!
Mamaly an'i Ari
Robin dia hoy izy:
Misy manana olana amin'ny fikarohana ao anaty dash? Tsy afaka mahazo valin'ny fikarohana an-tserasera aho, avy amin'ny tranonkala toa an'i Wikipedia na Deviantart, fa tsy ny zavatra hafa rehetra (video, sary, sosialy)
Mamaly an'i robin
nasaina dia hoy izy:
Eny, manokana, ity Ubuntu ity dia nivoaka tsara kokoa noho ireo izay nivoaka, hoy aho, ho an'ny zavatra LTS izany, na izany aza, tsy fantatro ny hafa fa izaho amin'ny zava-drehetra ary nanome olana ahy, ary amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny linux mint toa mahomby kokoa ho ahy io toa tsy hoe miorina amin'ny ubuntu io fa tsy misy isalasalana fa fampianarana tsara io, indrindra ho an'ireo izay hiditra ao amin'ny linux miaraka amin'ity ubuntu LTS ity
Mamaly amin'ny vahiny
Sorki dia hoy izy:
Salama, lasa tsara daholo ny zava-drehetra, saingy misy zavatra iray tsy azoko ary ny fametrahana sopcast .. Nijery trano fitahirizana aho nefa manome ahy hadisoana foana… Tsy mpifaninana Ubuntu aho, tiako ny olona rehetra afaka manampy ahy.
Valiny tamin'i Sorki
Izaho dia nanana olana mitovy aminao. 🙁
Tsy afaka nametraka azy tamin'ny kinova Ubuntu taloha koa aho.
marcohc79 dia hoy izy:
sudo apt apetraka compizconfig-setting-manager compiz-fusion-plugins-extra
Mahazo E aho: tsy hita ilay fonosana compiz-fusion-plugins-fanampiny
toa ahy ??
Mamaly an'i marcohc79
Toa nomena anarana indray ilay fonosana. Andramo izao:
sudo apt apetraka compizconfig-setting-manager compizplugins-extra
Isaka 98 dia hoy izy:
Salama, tena nahafaly ahy ny fampahalalana ato amin'ity torolàlana ity ho an'ny ... fanontaniana iray izay amporisihinao amin'ny solosaina findaiko miaraka amin'ny Intel Core i3 ao amin'ny 2.4 GHZ / Mangataka aho mba hisorohana ny tsy fahombiazan'ny OS X AOKA Hampiasa US SOFFWARE MAIMAIMPOANAO Hampiasa US LINUX
Valiny ho an'i Isaka 98
kansterz dia hoy izy:
Hey azafady mba valio aho, manao ahoana ity ubuntu ity? atoronao amiko ve izany? Leo an'i Arch aho sy ireo lesony, mila zavatra mora aho, vonjeo!
Mamaly an'i kansterz
Mey dia hoy izy:
Raha ekenao ny hevitr'ireo eto amintsika izay efa mampiasa linux-ubuntu !! Minoa ahy fa io no tsara indrindra azonao omena ny masininao sy ny fahasalamana ara-tsaina tsara indrindra azonao omena ny tenanao, tsy hoe kivy (sy famoizam-po) fotsiny aho amin'ny varavarankely, nahatonga ahy ho adala isaky ny mila mamolavola ny masiniko satria tena miadana na zavatra hafa niditra, na eo aza ny fanimbana azy io ary ny fizahana ny lesoka (izay nahatsiravina satria ny nanao izany isaky ny 15 andro dia nisy isan'andro), mbola nanana olana ihany aho, mainka moa fa ny Internet, manana vata 10 misokatra na varavarankely 5 miaraka amin'ireo kiheba maro no maty ho an'ny pc-ko dia nahatsiravina izany, mandra-pihaviny sy nikatona ny ZAVATRA REHETRA !! Vao tsy ela akory izay ny Lapako, vaovao teo amin'ny 2 volana teo, izay nantenako fa niasa bebe kokoa io, soa ihany aho fa nihaona tamina olona nametraka ny ubuntu teo amin'ny lalako, ary ny FIAINANA niaraka tamin'ny foko satria fantatro fa niova mihintsy izy io, miaraka amin'ny ububtu mahomby tokoa . fahafahan'ny lapanao, manana birao isan-karazany ianao ary afaka miasa tetik'asa isan-karazany amin'ny tsirairay, azonao atao ny manao ny lambanao tena manatanteraka sy miasa amin'ny ambaratonga antenainao, izaho manokana dia tiako be ny sariny, sariaka kokoa ny manova ny toeran'ireo loharanom-pahalalana miaraka amin'ireo rindranasa sy fanitarana izay tantaniny ary ny tsara indrindra amin'ny rehetra, dia misy vondrom-piarahamonina marobe izay ahafahantsika mifanohana. Ka ENY, UBUNTU dia atolotra anao tanteraka, ny hany ilainao dia ny mametaka tsara ny fampiasa azy ary amin'izany dia misy bilaogy maro!
Valiny tamin'ny Mey
Alex dia hoy izy:
Avereno jerena izy ary zahao izay lesoka (nahatsiravina izany satria isaky ny 15 andro ny manao azy io ……. Vao tsy ela akory izay ny Lapako, vaovao eo amin'ny 2 volana …….
hahahahahaha ho naveriko ho antoka na ratsy dia tsy namolavola ny windows fito pc efa ho 3 taona aho ary miasa ho ahy tanteraka aho manana lalao video 200 napetraka ary programa vitsivitsy vitsivitsy ka tsy mieritreritra aho ny varavarankely no ratsy indrindra mitranga dia misy ny olona manana toe-tsain'ny vavolom-belona vavolom-belona te-hanova ny olon-drehetra amin'ny tantaran'ny linux .. mora kokoa ny manome manaraka ary manaiky ny fikarohana ny console amin'ny repositories baiko sns sns sns nefa ny hack fahazoan-dàlana dia azo voajirika ary ireo rindrambaiko hafa sy lalao video koa ... hanana rindrambaiko maimaimpoana izahay hehehehehe
Valio amin'i Alex
Ace of spades dia hoy izy:
Nanaraka ny torolàlana hatramin'ny iray ho an'ny mpamily karatra sary aho saingy tsy maintsy nesoriko ilay mpamily tompony ary averiko ilay iray maimaimpoana raha vantany vao nanana vintana aho (ary nandany ahy izany).
Ny olana nanjo ahy taorian'ny fampiasako ilay manana dia ny, rehefa nanomboka aho dia toy ny hoe nifindra niankavanana ny efijery tao Ubuntu ary nahazo dian-kapoka marindrano kely aho. Izany rehetra izany dia tsy namela ahy hifindra ary tsy namela ahy hiditra amin'ny tsipika na zavatra hafa hiverina amin'ny fanaingoana voalohany. Tsy maintsy niady tamin'ny "mode graphique azo antoka" aho ary nanome ahy olana mitovy na latsaka kely, dia taorian'ny famerenana imbetsaka imbetsaka no namelany ahy hanova azy indray ary izao dia mandeha ara-dalàna.
Ny zavatra dia satria te-hanararaotra ny sary ao amin'ny Ubuntu aho, te-hahita ny lakileny hahafahako manomboka azy ara-dalàna ... ny maodely dia AMD Radeon HD 7670M, samy nanandrana tamin'ny fglrx aho. ary miaraka amin'ny fglrx-fanavaozana sy ny olana mitovy. Mety ho zavatra Unity ve izany? Angamba raha nanandrana ny Ubuntu Studio na Xubuntu aho dia tsy hitranga izany, tsy azoko antoka.
Ny maodelin'ny solosaina dia Toshiba Satellite L850 (eny, miaraka amin'ny UEFI ... fa io ampahany io dia vitako ny namaha azy).
Raha afaka manampy ahy amin'izany ianao dia tena feno fankasitrahana aho.
Mamaly an'i Ace of Spades
Ferr dia hoy izy:
Salama, ny Cinnamon PPA dia tsy 64-🙁
Valiny tamin'i Ferr
Salama ferr! Misaotra tamin'ny fanazavana!
Hanampy an'ity lahatsoratra ity aho.
Tsy afaka nanao ny fotoana Popcorn nandeha an-tongotra koa aho 😛
Rodolfo dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, te hahita aho raha misy olona afaka manome tanana ahy amin'ity olana ity. Maneho hevitra momba ny zava-nitranga tamiko aho ...
Ampidiro ny Ubuntu 14.04 amin'ny windows 8 amin'ny milina sony vaio vaovao. Atsaharo ny UEFI amin'ny alàlan'ny famindrana mankany amin'ny boot Legacy. Satria tsy afaka nanala ny famotopotorana momba ny fiarovana aho, jereo raha tsikaritr'i Ubuntu amin'ny fametrahana fa misy rafitra miasa hafa. Izany no fandehany. Avy eo manohy amin'ny fametrahana Ubuntu tsy misy olana.
Taorian'ny famerenako ny milina dia hitako fa ao amin'ny efijery roa izay ahafahako misafidy ny rafitra fiasa tadiaviko dia afaka manomboka fotsiny aho Ubuntu.
Ahoana no fomba hamahako an'io ary te hanomboka windows 8?
Valiny tamin'i Rodolfo
Salama namana ndao hampiasa linux
Grax maro ho an'ny fandraisana anjara dia feno tanteraka, manana fanontaniana aho, angamba tsy dia mifanaraka loatra amin'ilay lohahevitra io fa manantena aho fa afaka manampy ahy ianao. Te-hanova loko ao anaty bara sy ny horonan-dry zareo aho (miafina ny bara fisakafoanana) fa ny hitako dia vita amin'ny rafitra> fisehoana…. saingy tsy miseho amiko io safidy io, tsy misy fisehoana ao amin'ny rafitro, tsy haiko raha noho ny fisintomana ireo fitaovana sy ny fanovana izany, fa amin'ny kinova 12.04 dia tsy nanana olana tamin'izany aho, mbola teo ny bika. Tsy haiko ny antony fa na amin'ny system> antsipirihany aza izay tokony hitenenana hoe ubuntu 14.04 dia milaza ubuntu 13.10 WTF ??? !! fa ao amin'ny console dia milaza fa raha ny marina dia nametraka 14.04 aho…. Angamba afaka mitari-dalana ahy ianao, dia misaotra betsaka anao !! Andro tsara!
Kalinosblogger dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana!
Ny solosaiko dia 100!
Mamaly an'i Kalinosblogger
mari-toerana dia hoy izy:
Misy olona afaka manampy ahy amin'ny fomba hivoahana ity rafitra miasa ity ao amin'ny solo-saiko raha tsy misy fiatraikany, napetrako izy io
Valiny tamin'i Marcos
Nanomboka tamin'ny rafitra fiasa Linux aho ary manana traikefa tena ratsy.
Andao hanomboka: manana PC 3 aho, IBM Pentium 3, asus ary amd64. Pipermine, Fedora, Ubuntu 14 dia tsy niasa ho ahy, ary androany nanandrana ny KUbuntu aho, tsy nisy na iray aza niasa, ny mifanohitra amin'izay no nopotehin'izy ireo ny PC-ko. Tao anaty iray dia nametraka an'i Ubuntu aho ary tsy maintsy namboariko izany mba hahafahako manafoana tanteraka ny fahaverezan'ny lojika ny angon-drakitra ny rafitra fiasa hafa.
Tsy azoko faritana ny olana satria tsy nety akory izy io, voahidy ny pc. ankoatr'izay dia mila miverina mamerina miasa aho mba hiasa indray.
Ny fanampiana dia saika tsy misy na inona na inona, nisoratra anarana tao amin'ny forum Ubuntu aho tamin'ny Espaniôla ary hatreto dia mbola tsy nahazo fanamafisana aho.
Nilaza izy ireo fa loharanom-baovao misokatra tsy hitako izay rehetra izay, ny mifanohitra amin'izay dia toa natao ho an'ny vondrona sasany izy io, tsy manana safidy hongotana izy io, tsy mandeha amin'ny laoniny noho ny fiteny samy hafa tanteraka, amin'ireo izay iraisan'ny rehetra izay haintsika rehetra.
Izaho manokana dia nanandrana azy io satria nahasarika ny saiko maimaim-poana, izay tsy marina velively.
elav dia hoy izy:
Marcos, aza miteny mora. Ny zavatra voalohany tokony holazaiko dia tsy ny olona rehetra no manana traikefa mitovy amin'ny GNU / Linux, noho ny fahalalany, ny faharetany ary ny fitaovana ampiasainy.
Tsy misy OS manimba ny PC, na ny fitaovantsika: Antsika io. Ny olana dia eo amin'ny seza sy ny fitendry. Ankehitriny, dia tena tsy fahita firy fa amin'ny solosaina 3 samihafa, miaraka amin'ny fitaovana samihafa, fizarana 4 samy hafa no tsy mandeha. Manana zavatra iraisana ve ianao amin'ny lafiny hardware amin'ny rehetra? Satria ny artifact AMD farany tsy mandeha 100% azoko, fa ny zokiny tsy maintsy misy fanohanana.
Tsy amin'ny toerana rehetra dia mahazo fanampiana ianao ary ara-dalàna izany, satria TSY maintsy atao izany, na izany aza, manasa anao aho hanatona ny Forum anay hijery raha tsara vintana ianao.
Ny fizarana rehetra lazainao dia loharano misokatra, na farafaharatsiny 95%, fa tsy azoko hoe inona no antenainao ho hita na inona no antenainao hatao amin'ny fisian'ny kaody loharano. Azonao hazavaina ve aho? Azonao atao ve ny milaza amiko izay OS manana safidy esory? Inona no tianao holazaina amin'ny fiteny samihafa?
Ary averiko ihany, raha afaka izy ireo, farafaharatsiny mihoatra ny Windows sy OS X.
Mamaly an'i elav
Marcelo dia hoy izy:
Tsy napetraka ny sary hosodoko.
Ny dingana roa voalohany dia tsara, ny fahatelo tsy. Inona izany?
Valiny tamin'i Marcelo
Elkin dia hoy izy:
Valiny tamin'i Elkin
inona ny fampahalalana tsara
titane dia hoy izy:
Salama, rehefa nihaona tamin'i Ubuntu aho (tamin'ny 2010-2011) napetrako tao amin'ny Laptop Acer 3680 ary niadana izy io. (Heveriko fa noho ny nametrahako azy tamin'ny wubi) ankoatran'ny Laptop mahantra dia manana horonantsary 128mb sy 512mb ram ary processeur Intel Pentium M tokana, ankehitriny manana Linux Mint 16 (Mate) napetraka ao amin'ny Laptop Dell Latitude D351 miaraka amin'ny 3gb an'ny ram (2,8gb tena izy), processeur AMD turion (dual core), karatra sary 256mb ati ary mandeha tsara izy, na dia mahalana aza no mihidy.
Te hahafantatra aho raha afaka mandeha haingana ho ahy ity ubuntu ity sa hianjera (novakiako fa ny karatra ATI dia tsy tohanana na zavatra toa izany).
Miarahaba sy misaotra ny valiny.
Valio ny Titanium
Mamaly ny tenako aho, nametraka azy fotsiny aho ary mihazakazaka amin'ny hafainganam-pandeha mendrika izy (mihantona imbetsaka izy io).
Ulisses dia hoy izy:
Vao avy nametraka ubuntu aho tamin'ny compaq presario v5000 dia mandeha tsara ny zava-dratsy fa tsy mahita tambajotra tsy misy tariby izy ary tsy haiko ny mametraka ny mpisitrika ilay karatra dia bmc4311 broadcom
Valiny tamin'i Ulisses
Cibran dia hoy izy:
Holazaiko aminao ny fomba hanaovana izany, (Galisiana aho ary manana ny buntu amin'ny teny galisiana aho, ka mety tsy dia marina tsara ireo anarana omeko anao)
Manaraka ny fotoana dia manana ny menio misy ny bokotra fanidiana ianao, omenao ary safidinao ny "Preferansa System"
Rehefa tafiditra ao dia safidio ny "rindrambaiko sy ny fanavaozana" ary fidio farany ny "mpamily fananana" ao amin'ny kiheba farany ary any no ilazany anao raha te hametraka ireo mpamily amin'ny Broadcom ianao.
Valiny tamin'i Cibrán
Tao amin'ny Asus X50R dia nanana olana mitovy amin'izany (karatra Broadcom bcm4311). Ireo mpamily STA tompon'ny tany natolotry ny rafitra ahy dia tsy mandeha ka ny azy dia TSY NY mametraka azy ireo na manaisotra azy ireo amin'ny:
$ sudo apt-get purge bcmwl-kernel-source broadcom-sta-common broadcom-sta-source
Ary apetraho ireo fonosana:
Rehefa nanomboka indray dia mandeha ny wifi.
Tsy mandeha ity trano fitahirizana ity:
sudo add-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / cinnamon-stable
Misaotra anao niditra
Jebosa dia hoy izy:
ny dingana hametrahana Kanelina dia tsy mandeha, ireto no nandeha tamiko
sudo add-apt-repository ppa: gwendal-lebihan-dev / kanelina-alina
sudo apt-get vaovao
sudo apt-mahazo mametraka kanelina
Valio i Jebus
Salama, manana ny baiko diso rehetra ianao, tsy mety izany fa azo atao tsara.
Eny, ny "apt" sy ny "apt-get" dia samy miasa ho ahy. Amin'ity kinova farany an'ny Ubuntu ity dia azonao atao ny mampiasa ...
Martin dia hoy izy:
Salama Tiako ny hafatrao.
Tsy nampiasa linux nandritra ny 7 taona aho ary androany miverina amin'ny Ubuntu 14.04. Niova be ny raharaha.
Raha namaky aho dia hitako fa "apt install" fotsiny no nosoratanao fa tsy "apt-get install" araka ny tadidiko. Avy eo dia nanandrana aho ary tena nandaitra. Oviana no nampiharina izany fanovana izany? Samy hafa amin'ny apt-get na aptitude ve izany?
Valiny tamin'i Martin
Reynier dia hoy izy:
Salama manandrana ny ubuntu 14.4. Mahafinaritra ery
Valiny tamin'i Reynier
LANRE GREEN dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny fitarihanao tena.
Valio amin'i LINTERNAVERDE
Pablo dia hoy izy:
Misaotra betsaka, tsy misy toa ny lahatsoratra tsara sy azo ampiharina!
Mamaly an'i pablo
alvaro garcia isordia dia hoy izy:
Mba hanavaozana na fanavaozana ity rafitra fiasa Ubuntu 14.04 Trusty Tahr ity dia mila an'ireto baiko ireto ianao sudo apt-get update ary sudo apt-get fanavaozana.
Mamaly an'i alvaro garcia isordia
Richard dia hoy izy:
Salama, ahoana no ahafahako manova ny extension .zip ho .otx amin'ny ubuntu?
Vao tsy ela aho no nijanona tsy nampiasa windows ary nivadika ubuntu, ny olana dia tsy afaka mametraka ny rakibolana espaniola sy ny autocorrector amin'ny libreoffice aho, satria ny zip-bokiny ihany no ampidininy.
Mamaly an'i richard
Jorge dia hoy izy:
Torolàlana tena tsara, misaotra. Araraotiko ity fotoana ity hilazana aminao fa ny programa Unsettings hampifanaraka ny Ubuntu amin'ny Unity dia hita ao amin'ity adiresy ity:
Nanazava ny mpanoratra fa natao ho an'ny kinova Ubuntu teo aloha izy io ary Beta no toetrany. Mety hampidi-doza ny mpampiasa mametraka azy io.
Nametraka azy tamin'ny gdebi aho ary voavaha avokoa ny fiankinan-doha ka nametraka azy aho ary nihazakazaka ary nanao izany tsy nisy olana Tsy mbola nanao fanovana aho, ka tsy afaka manome anao vaovao momba ireo karazana valiny ireo-
Mamaly an'i Jorge
tsy ampy taona dia hoy izy:
Manana olana amin'ny Xubuntu 14.04 aho: tsy mandeha ny compiz.
Mametraka sy manamboatra ny zava-drehetra araka ny nataoko hatrizay aho, ary rehefa mamerina ny X na ny rafitra dia tsy mandeha tsotra izao ny compiz ary indraindray azoko ilay hafatra hoe mihidy tampoka ny Compiz ary manome ahy ny safidy hamoha na hikatona foana.
Efa nandefa google aho hatramin'ny nivoahan'ny Xubuntu ary tsy nahita zavatra ilaina, ny hitako rehetra dia torolàlana amin'ny fametrahana compiz amin'ny kinova taloha, fa tsy misy ifandraisany amin'ilay olana misy eo amin'ny solosainako.
Alefako eto ity raha toa ka misy manana izany olana izany. Na dia tsy tena ilaina aza izany compiz izany dia ilaina ho ahy, fa io no fomba tokana ahafahako manafoana ny monitor-ko.
Tsy misy holazaina intsony, mankasitraka ny sainao aho.
Mamaly an'i menoru
xxmlud dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara! Fantatrao ve ny tranokala milaza fa sary ATI / AMD mifanentana na miasa tsara amin'ny linux? (Izy ireo dia manana fanohanana ary miasa mendrika)
Valiny amin'ny xxmlud
Berenes dia hoy izy:
Tsara fotsiny, misaotra betsaka
Valiny tamin'i Berenes
Tongasoa anao, tongasoa ianao!
Frank dia hoy izy:
ny zava-mitranga dia te-hametraka ubuntud amin'ny solosaina findainy aho, manana 2 gb ram 1 ghz izy io nefa manana fotokevitra roa sosona hiasa ho ahy
Mamaly an'i frank
exgaete dia hoy izy:
Lavorary, tena tsara!
Valiny ho an'ny exgaete
Alberto Acevedo dia hoy izy:
Misaotra ny fizarana!
Mamaly an'i alberto Acevedo
Roger dia hoy izy:
Salama daholo, novakiako ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra, ny marina dia tsy mpampianatra aho amin'ireto zavakanto maizin'ny Ubuntu ireto, saingy nahasarika ny saiko fa afaka mifidy eo amin'ny Gnome Flashback sy ny Unity amin'ny tontonana fidirana ianao, fa Tsy afa-po tamin'io fotsiny aho, noho izany dia nametraka ny Gnome 3 aho, satria ireto andalana manaraka ireto no nanonona ny fomba, izao ny olana dia tsy miasa intsony ny Ubuntu Tweak ary indraindray ny interface-ko dia tsy mampiseho ireo singa rehetra toy ny checkBox ary rehefa manandrana manavao ny avy amin'ny manavao ny manager dia hitako fa misy fonosana diso na ppa efa tonta ary afaka manao fanavaozana ampahany aho ary raha omeko hanohizana izany dia mangataka ahy hamerina hametraka programa marobe izay ananako ao Ubuntu indray, maninona no? Mbola azoko atao ve ny manana firaisana miaraka amin'i Gnome3? Hisafidy ny iray amin'ireo 2 ve aho? …. Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara ary manantena aho fa afaka manampy ahy ianao
Mamaly an'i roger
Desiderio Goyen dia hoy izy:
mpitari-dalana tena tsara
Valiny tamin'i Desiderio Goyen
Diego dia hoy izy:
Salama, ity torolàlana ho an'ny Ubuntu Gnome ity ve? miala tsiny fa tsy manam-pahaizana linux aho. Misaotra anao.
Valiny tamin'i Diego
Imma dia hoy izy:
Nandritra ny fotoana kelikely dia nanana fihoaram-pefy tafahoatra tamin'ny varotra an-tserasera sy ny doka tamin'ny doka aho, efa tonga amin'ny tsy fahafahako manokatra varavarankely tsy misy zavatra miseho.
Izany rehetra izany satria ny fanaovana taranja joomla dia nanokatra seranan-tsambo aho na zavatra toa izany ary ankehitriny tsy haiko intsony ny fanamboarana azy. Tsy tantiko intsony ny Trojans ary ho hitanao fa tsy dia mahay loatra momba an'io raharaha io aho.
Azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza no handaminana azy?
Misaotra betsaka noho ny sainao sy ny fotoanao!
Valio amin'i Imma
Mitranga aminao ve izany amin'ny Linux na Windows?
dybah dia hoy izy:
Ny torolàlana dia tena tsara ho ahy raha manandrana ubuntu kasaiko handeha amin'ny kinova 14.04
Mamaly an'i dybah
Elias dia hoy izy:
Salama, mila fanampiana haingana araka izay tratra aho, ny olana dia tsy mandeha amiko ny baiko, mahazo /// E foana aho: Tsy azo sakanana ny lahatahiry fitantanana (/ var / lib / dpkg /), mety misy dingana hafa mampiasa azy io ?
Mbola tsy afaka mampiasa ny ivon'ny rindrambaiko ubuntu aho
Pd: Ny volako amin'ny ubunto dia = 0
Valiny tamin'i Elià
Marina izany ... mety nanao fanavaozana na fametrahana fonosana ianao ary notapahinao io antony io noho ny antony sasany. Noho io antony io, dpkg dia lasa "manina". Ny tokony hataonao dia ny mamafa ny fisie / var / lib / dpkg / lock miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
sudo rm -f / var / lib / dpkg / hidy
Hugo Ramón Arzamendia Rodriguez dia hoy izy:
Salama. Rehefa avy nametraka ireo fanavaozana ny Ubuntu dia tsy manokatra ahy izy io, dia miseho mainty eo amin'ny efijery, izay ataoko.
Valiny ho an'i Hugo Ramón Arzamendia Rodriguez
karyn dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara ho antsika izay manomboka mitety an'izao tontolo izao
Mamaly an'i karyn
Enrique dia hoy izy:
Salama, hitako fa amin'ity lahatsoratra ity dia mampianatra mampiditra trano fitehirizan'ny antoko fahatelo ianao, saingy tsy hitako fa mampitandrina ny loza mety hitranga amin'ny filaminana sy fitoniana amin'ny rafitra fiasan'ity fampiharana ity.
Tsy manam-pahaizana momba ny informatika aho, saingy notoroana hevitra aho ny tsy hametraka ppa, satria izay rehetra tsy ao amin'ny ivon'ny rindrambaiko Ubuntu dia mety hiteraka olana.
Te hahafantatra ny hevitrao aho, misaotra
Valiny tamin'i Enrique
Amin'ny taratasy dia misy ny risika. Fa raha ireo mpihazona ny PPA dia mpandrindra atokisana dia tsy hisy ny olana. Miaraka amin'io fisainana io ihany, ny tolo-kevitro dia ny hampiasa tsimoramora PPA. Tsy ny fanalavirana ny fampiasana azy fa ny fampiasana fampiasana antonony sy manan-tsaina.
Etsy ankilany, tsy mahalala olona voan'ny virus na malware amin'ny fampiasana PPA aho.
Celsus dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny fampahalalana fa tena manampy
Valiny tamin'i Celso
Alonso AR dia hoy izy:
Vaovao amin'ny ubuntu aho ary nanandrana ny kazam fa manana olana amin'ny filalaovana ireo horonantsary amin'ny rafitra fiasa hafa toy ny android na windows aho, maninona no mitranga izany raha manoratra azy ireo amin'ny mp4 aho? Misaotra anao nanampy
Valio amin'i Alonso AR
Iñaki dia hoy izy:
Te hahafantatra ny fomba hanovanao ny fihetsika aho raha manindry indroa amin'ny varavarankely. Izany hoe, miaraka amin'ny toerana misy anao, ny fipihana indroa amin'ny varavarankely dia mampitombo azy io. Ary ny tiako hatao dia ny mampihena kely azy amin'ny alàlan'ny tsindry indroa. Amin'ny kinova hafa an'ny Ubuntu dia vitako izany saingy tsy tadidiko intsony ny fomba nanaovana azy ary tsy hitako na aiza na aiza.
Misaotra betsaka anareo
Mamaly an'i Iñaki
Jose Pablo Ramos dia hoy izy:
Misaotra betsaka anao nanokana fotoana hanazavana izany rehetra izany, taloha ela be aho te-hametraka Ubuntu amin'ny masiniko saingy sarotra tamiko izany ary nanome mega fanampiana ianao, misaotra!
Valiny tamin'i José Pablo Ramos
Jonathan dia hoy izy:
Salama namana, mariho tsara fa nanapa-kevitra ny hijery ny tontolon'ny Linux aho, noho ny antony mora tsy ampiasako ny Ubuntu, saingy hitako ny momba ny Elementary ary mandraka ankehitriny dia mandeha tsara izy io, saingy tsapako fa miadana izy io, ndao lazaina fa mavesatra ho an'ny PC-ko, mampiasa Elementary 64BITS, 4GB aho. an'ny RAM, Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz × 2; VIA Technologies, Inc. CN896 / VN896 / P4M900 [Chrome 9 HC] (rev 01) ary kapila mangirana 120GB, zavatra hahatonga azy ho ara-dalàna kely hoy aho: / 64BITS? Manantena aho fa tsy hanome hevitra amin'ny toerana tsy mety fa vitsy ny bilaogera Elementary ary azoko fa ny Elementary dia mifototra amin'ny Ubuntu, noho izany dia tao anatiny ihany izany, heveriko.
Valiny tamin'i Jonathan
Isaac dia hoy izy:
Vaovao amin'ny tontolon'ny Linux aho, ary te-hametraka fanontaniana.
Nampiasa Linux Mint aho ary tiako ny interface misy azy ary! Saingy rehefa nametraka an'i Ubuntu aho satria araka ny reko fa tsara kokoa ny fizarana (tsy afaka mitsara aho fa newbie), napetrako tsara ary hita fa tena tsara ny zava-drehetra fa ny Gnome entin'i Ubuntu ary tsy mifanaraka aho.
Ny fanontaniana dia izao: Raha mametraka Cinnamon izay interface misy Linux Mint aho, afaka manana kisary ve ny birao sy ny menio Native LM?
Heveriko fa tsara kokoa raha apetrakao amin'ny fanontaniam-panontaniana voavaly ity fanontaniana ity Anontanio FromLinux amin'izay ny vondrom-piarahamonina iray manontolo dia afaka manampy anao amin'ny olanao.
Cod Woman (azafady tsy spam aho) dia hoy izy:
Tsy SPAM io ¬¬: Salama. Azafady noho ny famoahana ahy, ary azafady ireo mahatsiaro ho tafintohina amin'ity fanehoan-kevitra ity: Ny zava-misy dia manana olana aho amin'ny fanavaozana, satria milaza amiko izy fa tsy nohavaozina ny tahirin'ny sonia ary ny pejy tsy maintsy nesoriko azy ireo dia milaza fa tsy manana ny lakileny misy. Ny hadisoako dia amin'ny GPG sy ny pejy deba multimedia
Ny fisie rakitra sasany tsy nahomby tamin'ny fampidinana azy. Tsy noraharahaina izy ireo, na ny taloha nampiasaina »
Fantatro fa tsy maintsy manova sy manitsy an'io ao anaty lisitra aho, saingy tsy haiko ny fomba. Nanaraka ny torolàlana tamin'ny pejy maro aho, fa ny tena marina dia tsy dia azoko tsara, ary efa nanana traikefa ratsy aho ary tokony hametraka indray. Ie. Fantatro fa izany no ianaranao avy; Saingy misy olana iray hafa: an'ny solosaina tsy an'ny zaza tsy mahalala na inona na inona momba an'i Ubuntu, ary ny ray aman-dreniny dia iray amin'ireo olona mino fa raha mihantona ny solosaina dia satria zavatra matotra no nitranga taminy. Mba ampio aho azafady. Tsy teknisianina aho, fa mampiasa solosaina ity. Ary miala tsiny indray aho noho ny nahatonga izao fikorontanana hita izao taminao.
Mamaly an'i Bacalao Woman (azafady fa tsy spam aho)
izany no mahatonga ny windows ho tsara indrindra
Linux dia afaka miasa tsara amin'ny mpizara saingy ho an'ny mpampiasa iraisana dia manahirana be izany ary miaraka amin'ilay tantara iray ihany izay efa mankaleo fa tsy mila antivirus ianao dia mieritreritra fa efa voavaha daholo ny zava-drehetra.
Yukiteru dia hoy izy:
Tsy mila ireo repo deb-multimedia mihitsy ianao, satria ny zava-drehetra dia efa tafiditra ao amin'ny repos ofisialy, afa-tsy ny tranga tena manokana (fitaovam-peo matihanina tsy tafiditra ao amin'ny distro anao amin'ny fomba ofisialy) dia tsy mila izany tahiry izany ianao.
Ary ao amin'ny pejy ofisialin'ny deb-multimedia dia manazava tsara ny fomba hiatrehana ny tranga misy anao izy ireo, mametraka ny fonosana mifanaraka amin'ny fanalahidy fitahirizana.
Mamaly an'i Yukiteru
Fred cespedes dia hoy izy:
fandraisana anjara tena tsara… Vao avy nametraka ltit 14.04 lts aho ary mandeha tsara amin'ny pc Dell izay misy 2g Ram fotsiny
Valiny tamin'i Fred Cespedes
Manuel Ch. dia hoy izy:
Fandraisana anjara tena tsara. Misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Manuel Ch.
optimusp dia hoy izy:
Salama, hitako fa tena mahavariana ny fametrahana ny fametrahana ny Ubuntu, misaotra noho ny vaovao. 🙂
Valiny amin'ny optimusp
Chaparral dia hoy izy:
Misaotra ny mpilalao an'ity lahatsoratra ity aho, satria tena tsara ho ahy ny fanazavany.
Miarahaba anao aho amin'ny asa soratanao, satria na dia takatra aza ny zom-pirenenao dia afaka nahatakatra tsara ny fehezanteninao aho ary, mihoatra izany, vitako ny nampihatra azy ireo tamin'ny fomba feno sy mahomby. Toa ahy fa ny tena zava-dehibe dia ny fahalalana ny fomba hampazava ny tenanao ary amin'ity tranga ity dia.
Mamaly an'i Chaparral
fede dia hoy izy:
Vao haingana aho no nametraka ny Xubuntu 14.04, ahoana ny fomba fanavaozana ny FFox? Tsy azo havaozina avy amin'ilay programa ve izy io toy ny kinova fitaratra (havaozina avy amin'ny menio fanampiana).
Efa nijery ny "ivon-rindrambaiko ubuntu" aho (araka ny asehon'ny lahatsoratra) fa milaza amiko fotsiny izy fa napetraka (ilay kinova izay sns) ary tsy hitako ny manavao azy avy any, ahoana no hataoko?
Mamaly an'i fede
Nahu dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, misaotra betsaka!
Valiny tamin'i Nahu
MATT SEWN dia hoy izy:
Misafotofoto ny MATE. Nametraka azy aho, nanova ny safidiko, nitady ny fomba hanesorana azy aho, nanala azy aho ary…. Rehefa te hiditra aho dia TSY fantatro ny teny miafina. Nanandrana fomba maro hidirana aho saingy tsy nisy fomba hamerenako ny birao. Tsy maintsy nametraka indray ny Ubuntu 14.04 sy ny programa rehetra ilaiko aho.
Misaotra anao noho ny fifantohanao
Valiny amin'i MATTE SEWED
Fandraisana anjara tsara !!!!!
Vaovao aho amin'ity lohahevitra momba ny GNU / Linux sy ny derivatives ity.
Ny fanontaniako dia ny olona TSY MANANA Internet izay azontsika atao, izay ahafahantsika misintona fampiharana X na Y ilaintsika.
Misaotra tamin'ny sainao.
Salama! Voalohany indrindra, miala tsiny amin'ny fahatarana amin'ny famaliana.
Manoro hevitra anao aho hampiasa ny serivisy Ask avy Linux (http://ask.desdelinux.net) hanatanteraka ity karazana consultation ity. Amin'izay dia afaka mahazo ny fanampian'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo ianao.
boky torolàlana tsotra tsotra sy mahomby ho an'ireo vao manomboka amin'ny linux bilaogy tena tsara ho an'izany dia ampiasaina izy ireo hanome fanampiana, arahaba namana sakaiza misaotra betsaka avy any venezuela, caracas
jmsima dia hoy izy:
hace 5 taona
Lahatsoratra tsara, nanampy ahy betsaka ny fanazavana, misaotra betsaka 🙂
Mamaly an'i jmsima
Compa apetraho ny ubuntu 16.04.1 32 bit, saingy tsy afaka milalao horonantsary amin'ny browser aho, mijery horonantsary amin'ny memoara ivelany na anatiny, tsy dia manana fahalalana firy amin'ity rafitra Ubuntu ity aho, azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba anaovako video amin'ny internet sns.
Mamaly an'i martin
Martsa dia hoy izy:
Valio ny mars
Mametraka Openbox amin'ny Arch Linux
Efa ho herintaona taorian'ny nahafatesan'ny Google Reader Inona ireo mpamaky RSS an-tserasera sisa tavela?